गोल्डेन बुटका प्रमूख दाबेदार : को हुन् ह्यारी केन ?
काठमाडौं । इंगल्याण्ड राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान तथा प्रमुख स्ट्राइकर ह्यारी केन रुसमा जारी विश्वकपमा गोल्डेन बुटको लागि अघि बढिरहेका छन् ।
यो विश्वकपमा उनले अहिलेसम्म छ गोल गरिसकेका छन् र उनका प्रतिस्पर्धीहरु खेलाडीहरुको टोली यो विश्वकपबाट बाहिरिसकेको छ । जसको कारण उनी यो विश्वकपका लागि गोल्डेन बुटको प्रमुख दाबेदार खेलाडी हुन् ।
इंगल्याण्डलाई सेमिफाइनलसम्म ल्याएका ह्यारी केन यसपटकको विश्वकपको उपाधि आफ्नो टोलीलाई जिताउन लागिपरेका छन् ।
वास्तवमा को हुन् त ह्यारी केन ?
ह्यारी केनको जन्म सन् १९९३ मा लण्डनको वेल्थम्स्टमा भएको हो । सानैदेखि फुटबलमा रुचि राख्ने केनले इंगल्याण्डका पूर्व फुटबलर डेभिड बेकह्यामले अध्ययन गरेकै विद्यालयमा अधययन गरेका थिए ।
बेकह्यामले अध्ययन गरेको चिङफोर्ड फउण्डेसन स्कुलमा केनले अध्ययन गरेका थिए । सानैदेखि उनी निकै चलाख रहेको र फुटबलको टोलीमा नेतृत्वको कला पनि उनीमा भरपूर रहेको विद्यालयका शिक्षकहरु बताउँछन् ।
केनलाई आफ्नो फुटबलको करियर सुरु गर्दा भने केही समस्याको सामना गर्नुप-यो । उनले बालक हुँदा रिड्गवे रोभर्सको लागि खेल्ने गर्थे, जहाँ डेभिड बेकह्यामले पनि खेलेका थिए । तर उनलाई आर्सनल र टोटनह्यामले भने परीक्षणको क्रममा असफल भएको भन्दै लिनका लागि अस्वीकार गरेका थिए ।
उनी धेरै तौलको भएको कारण उनलाई उक्त क्लबहरुले लिनको लागि अस्वीकार गरेका थिए । पछि वार्टफोर्डमा टोटनह्यामको विरुद्धमा निकै राम्रो खेल प्रदर्शन गरेपछि भने टोटनह्यामका प्रशिक्षकले उनलाई आफ्नो टोलीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए । केन सानैदेखि खेलका साथै फिल्म हेर्न पनि रुचाउँथे ।
यो पटकको विश्वकपमा केनलाई अत्यधिक मार्किङ गरिएको छ । यो विश्वकपमा निकै घातक किसिमको मार्किङ गरिएका स्ट्राइकरमा केन सबैभन्दा अगाडि आउँछन् ।
उनले पोस्टमा गरेको छ प्रहारहरु सफल भएका छन् भने उनले नौ प्रहारहरु विपक्षी पोस्टमा गरिसकेका छन् । दुई वर्षअघिको युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा उनले १३ प्रहारहरु गरेका थिए तर उनले एक गोल पनि गर्न भने सकेका थिएनन् । गएको प्रिमियर लिगको सिजनमा भने उनले एक सय ८४ पटक पोस्टमा प्रहार गरेका थिए ।
ह्यारी केनको दुईओटा घरहरु छन् । उनकी प्रेमिका कटेइ गुडल्याण्डसहित उनी एसेक्समा बस्दै आएका छन् । यो घर निकै शानदार ढङ्गले निर्माण गरिएको छ । यो घरमा उनीहरुकी एक छोरीका साथै दुई कुकुरहरु पनि रहँदै आएका छन् । केनको दोस्रो घर भने टोटनह्यामको मैदाननजिकै रहेको छ ।
राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता सुरु
स्कटल्याण्ड सिरिजका लागि क्यानद्वारा १४ सदस्यीय नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा